Halkee ayuu ku dambeeyay shirkii madaxda madasha qaran ee Muqdisho ka socday? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Halkee ayuu ku dambeeyay shirkii madaxda madasha qaran ee Muqdisho ka socday?
Shirkii madaxda madasha wadatashiga qaran oo 15-kii bishan Disembar ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaan weli soo af-jarmin, iyadoona shirkaasi uu hareeyay mugdi iyo khilaaf baahsan.
Qaar ka mid ah madaxda shirkaasi ka qeyb-galeysa ayaa qaadacay shirka, waxaana ka mid ah madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoonbe), iyadoona madax kale intii uu shirka socday ay safaro dibadeed uga tageen shirka sida Cumar C/rashiid, C/kariin Guuleed, Shariif Xasan iyo Cali C/laahi Cosoble.
Qodobadda ugu muhiimsan ee la sugaayay in go’aan looga gaaro shirkaan oo ay ka mid ahaayeen, Qoondada xubnaha Aqalka sare ee Somaliland iyo dhameystirka doorashada iyo xilliga doorashada madaxda cusub ayaan wax heshiis ah laga gaarin, waxaana kusoo biiray go’aan ka gaarista kuraasta la isku heysto ee ay laaleen guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka.
Sidoo kale, xogta laga helayo madaxda madasha watashiga qaran ayaa sheegaya in war-murtiyeed la diyaariyay in laga soo saaro shirka daba dheeraaday uu dib u dhac ku yimid muddo 3 jeer ah oo la isku dayay in la shaaciyo, kadib markii hal qodob oo ka mid ah arrimaha horyaala lagu guuleysan waayay in laga heshiiyo.
Ugu dambeyntii, doorashada 2016-ka oo haatan u muuqato inay gaari doonto sanadka 2017, ayaa laga cabsi qabaa in is-jiid-jiidka madaxda sare uu keeno inay sii jiitanto doorashada islamarkaana waqtiga doorashada ay kasii dib dhacdo xilliga la qorsheeynayo inay ku dhacdo.